Soo-saareyaasha Maaskarada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Maaskarada Shiinaha
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo karo 513001A
Maaskaro-Hot-iibinta (Mr. fool xun Mr.) dunta daabac Diy Embroidery Kit isticmaal gacmo - lagu sameeyey daabac saddex-geesood ah, ha u gacanta u sameeyo si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo karo 513001B
Maaskaro-ku-iibinta kulul (Marwada xun) Dunta Khariidadda Diy-ga ah ee loo yaqaan 'Diin Embroidery Kit' ayaa loo isticmaalaa gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo ee 513002A
Maaskaro-Hot-iibinta (Blue brocade men) Qalabka dunta daabacan Diy Embroidery Kit isticmaal gacmo - lagu sameeyey daabac saddex-geesood ah, gacanta ha samayso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo karo 513002B
Maaskaro-Hot-iibinta (Blue brocade women) Xidhmada Diy Embroidery Kit isticmaala gacmo - lagu sameeyey daabac saddex-geesood ah, ha u gacanta u sameeyo si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo ee 513003
Maaskaro-iibinta kulul (Xaraashka ubaxa) Qalabka Mawjadaha Diin-daabaca ah ee loo yaqaan 'Dibo Embroidery Kit' ayaa isticmaala gacmo-gacmeed saddex-geesood ah leh, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo oo xirmi kara 513005A
Maaskaro-iibinta kulul (Udugga madow) Dunta Tilmaameedka Dij Embroidery Kit isticmaal gacmo - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Qalabka wax lagu qurxiyo ee jumlada ah ee wajiga lagu qurxiyo karo 513005B